Ingabe umhlahlandlela we-Google SEO ungathuthukisa amazinga ami?
Ukusebenzisa injini yokusesha kuyinkqubo yobuchwepheshe, yokuhlaziya nokucwaninga eyenzelwe ukuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi ezinjini zokusesha kanye nemali engenayo yomthengisi wesibili. Kuyinto eyaziwa kahle ukuthi udinga ukwandisa isayithi lakho ngokuvumelana nayo yonke imihlahlandlela yenjini yokusesha ekhona. Njengoba i-Google engumdlali omkhulu emhlabeni jikelele, udinga ukwandisa iwebhusayithi yakho emva kwemithetho yokusebenza ye-Google. Lo mhlahlandlela we-Google SEO unikezelwe ekusebenziseni ama-SEO amasu asebenzayo asemhlophe azokusiza ukuba ubheke ukuhamba kwekhwalithi kusayithi lakho. Awekho amasu we-SEO omnyama we-SEO kuze kufike ku-Google.
imithetho yokusebenza ye-Google
i-Google igcizelela abathengisi be-intanethi balandela imithetho yayo yokuthuthukisa iwebhusayithi ukuze kuthuthukiswe isipiliyoni somsebenzisi ngalesi simiso sokusesha. I-Google imivuzo yemasayithi enikeza abasebenzisi abajwayelekile abanokuqukethwe okuphezulu nekhwalithi yamasu okuthuthukisa ikhono elimhlophe. Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa kokugcina kwe-Google kushicilela abanikazi bewebhusayithi ukwenza imithombo yabo yewebhu iselula-friendly.
Uma ugcina le mithetho yokusebenza ejwayelekile, uyingozi ukulahlekelwa izikhundla zakho ku-SERP futhi uthole izinhlawulo kusuka ku-Google. Kufanele uqaphele ukuthi ezinye zezindlela zokuthuthukisa i-website rankings, empeleni, zingekho emthethweni. Isibonelo, ukugaxekile nokukhwabanisa akuvumelekile e-USA nase-UK.
Kungukuthi ukulalela noma ukuphula lezi ziqondiso ze-Google. Kodwa-ke, uma ungumnikazi webhusayithi we-smart and prospects, kufanele ucabange ngemiphumela yamasevisi we-black-hat optimization.
Yonke imininingwane oyothola kulo mhlahlandlela we-Google SEO ngokuphelele ngaphakathi kwezinhlahlandlela zenjini yokusesha futhi izokusiza ukuba uthuthukise khona kuwebhusayithi yakho ye-intanethi bese uheha ithrekhi ehlosiwe.
Umhlahlandlela we-Google SEO: Usesho lwegama elingukhiye
Kumelwe wenze ucwaningo lwegama elingukhiye ngaphambi kokuba uqale inqubo yakho yokuthuthukisa iwebhusayithi. Ucwaningo lwegama elingukhiye lukuvumela ukuba ukhethe amagama afanelekile futhi ahlosiwe okusesha azokunika ithuba lokuheha izithameli ezihlosiwe futhi uthuthukise izikhundla zakho eziphezulu ku-Google. Ukuqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye bese uthole ukuthi yimiphi imishwana eyinhloko enokuncintisana okuphakeme kakhulu, udinga ukuhlinzeka ngokuhlaziywa kwe-niche emakethe ephelele. Kunconywa ukusebenzisa ingxube yamagama angukhiye omude namagama abanzi. Ukwenza kube lula inqubo yamagama angukhiye ukusikisela, ungasebenzisa amathuluzi angenayo okuzenzakalelayo njenge-Google Keyword Planner, Ithuluzi Lokusesha Legama Eliyinhloko le-WordStrem, kanye ne-18 (Semalt Auto SEO Tool) .
Umhlahlandlela we-Google SEO: Ukulungiswa kwesayithi
Uma usuqedile ukucwaninga ngegama elingukhiye lakho le-Google SEO bese wenza uhlu lwamagama aphezulu wokusesha ivolumu, manje sekuyisikhathi sokudala ikhwalithi nokuqukethwe okuhloswe ukukhomba amakhasimende akho angahle. Imishwana ebalulekile kakhulu ehlosiwe idinga ukuvela kokuqukethwe kwakho ngokwemvelo futhi kufanele ihambisane nesihloko. Uma kungenjalo, okuqukethwe kwakho ngeke kufundeke futhi kuzobukeka ku-spammy. Ngakho udinga ukugwema ukugxilisa okuqukethwe kwakho ngamagama angukhiye njengoba kwenza izivakashi zakho zewebhu zikhungatheke futhi zinikeze umbono wezinjini zokusesha ozama ukuzenza zihluke ukucinga.
Umhlahlandlela we-Google SEO: Ukwakha Isixhumanisi
Indlela ephelele yokwandisa ukubonakala kwakho kwewebhusayithi ukukwabelana ngokuqukethwe kwakho kumanethiwekhi omphakathi nokwakha izixhumanisi ezifanele kusayithi lakho. I-Google inezihlungi ezithile ezizibuyekezo eziqhubekayo zokubheka abakwa-webmasters abasebenzisa amasu wokwakha ama-black hat. Uma unquma ukusheshisa inqubo yokwenza ngcono ngokuthenga izixhumanisi, lungele ukuthola ingxenye yezinhlawulo ze-Google. Ukuze uthuthukise ukuqashelwa komkhiqizo wakho futhi ukhulise ukuchofoza-ngezinga, yenza uhlelo lokuthumela ibhulogi bese wenza okuqukethwe okuphezulu okuzokwabiwa ngabasebenzisi Source .